Amin'ny zavatra marobe tokony ho fantatra, dia zavatra telo loha ihany no ho raisintsika hanehoana ny fampianaram-pinoany:
31 - Ny Fampianarany:
Raha misy te-hnontany ny amin'ny fahamarinan'ny fampianarana Teozofia dia lazainay tsotra fa tsy misy marina na dia kely akory aza izany.
- Marina fa mino ny zavatra rehetra hatramin'ny any ankoatra aza izy. Nefa any ankoatra inona, na aiza?
- Mino karazana valisoa na karama izy. Momba ny inona izany?
32 - Fahadisoana miseho:
Misy hevitre telo loha no hojerentsika amin'izany:
321 - Ny Foto-pinoan'ny Fikambanana Teozofika dia miorina amin'ireto zavatra ireto:
* - Ny "Réincarnation": Mifamatotra amin'ny fivoarana ara-moraly ny finoany momba izany.
* - Ny "Karma": Inoany fa misy ny Lalàn'ny valisoa, na karama (misy itovizany amin'ny tenintsika izany).
* - Ny "Mahatmas": Ny Mahatmas moa da tsy hafa fa ny fanahy lehibe izay antsoin'ny mpanao fivavahana miafina hoe: "Grand Maître". Ny tiany hambara amin'io dia tsy hafa fa ny vokatra azo avy amin'ny fivoaran'ny olombelona, ka mahatonga ny olona iray ho tanteraka sy tonga lafatra. Ary ny fiafaran'izany fivoarana izany, dia hahatongavana ho "Maître Suprême" (Mpampianatra tampony).
322 - Fombam-pivavahana miafina:
Ny Teozofia dia tsy hafa fa ny kristianisma mivavaka amin'ny fomba miafina. Ka ny famonjena azon'ny mpikambana ao aminy dia azo amin'ny alalan'ny fahalalana (Gnosticisme).
323 - Panthéisme:
Amin'ny Teozofia dia andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny Trinité aminy dia fanehoan-kery telo sosona: hery, fahendrena ary fihetsiketsehana ataon'ny mambra.
324 - Fanampiny:
Ho fanampin'ireo dia ny hanipihana ny tena inoany dia ny firahalahiana eran-tany amin'ny samy olombelona.
33 - Ny Finoany an'i Kristy:
Efa voalazantsika fa ankoatra ireo mpampianatra samihafa dia misy ny "Mpampianatra tampony". Rhefa ho teraka indray eo amin'ny tantara izy, dia tonga kristy ao amintsika. Efa in-dimy (5) izy no teraka indray:
- Tao amin'ny tenani Bouddha (Inde),
- Tao amin'ny tenan'i Hérmes (Egypte),
- Tao amin'ny tenan'i Zoroastre (Perse),
- Tao amin'ny tenan'i Orpheus (Grèce),
- Ary tao amin'ny tenan'i Kristy (Jodia).
Rehafa nonolotra ny tenany tamin'ny "Mpampianatra lehibe" i Kristy (araka ny fampianarany), dia tamin'izay fotoana izay indrindra no teraka tao aminy ny "Mpampianatra Lehibe".
Krishnamurti, moa no voalaza ho tokony ho "Mpampianatra Lehibe" iray taorian'i Kristy. Tsy tanteraka izany, satria nisy tsi-fahombiazany tao. Ary io no nahadiso hevitra sy fanantenana an-dRamatoa Besant, izay naminany momba izany.